A Steve Jobs basa chikumbiro chakatengeswa kwemazana mazana matatu emamiriyoni euros | Ndinobva mac
A Steve Jobs chikumbiro chebasa chakashambadzirwa kweanoda kusvika mazana matatu ezviuru euros
Zvese zvinonaka, zvinonhuwirira kana kuti Apple ingangopedzisira yave kukosheswa pane imwe nguva. Makore mazhinji apfuura, zviri nyore kune iwo mafandesi kusvika pamitengo yeastronomia yezvinhu izvo zvinotengeswa. Ngatirangarirei Apple imwe kana izvo zvinhu zvave zvevagadziri vekambani. Ivo vese vane halo yerudo uyezve, vega. Kana zvinhu izvi zviri zvaSteve Jobs, kukosha kwavo kunowedzera uye kana chiri chinyorwa muruoko rwake, zvakatowanda. Chazvino chave chiri okisheni yechikumbiro chebasa.
Zvese zvakakomberedza Apple zvinokanganisa mumwe munhu kuzvitenga uye achibhadhara mari yakawanda nazvo futi. Kana izvo zvaunoda kushambadzira iri rakanyorwa nemaoko mweya weApple, Steve Jobs, icho chinhu chinowana kukosha kusingafungidzike uye kukosha. Ndozvakaitika pachikumbiro chebasa ichi chakaitwa naMabasa pachake. Chinhu chinoda kuziva nezveiyi okisheni ndechekuti panguva ino yakaiswa kutengeswa gwaro chairo uye rakafanana asi rakavhenekwa. Zvine musoro kuti chimiro chepamusoro chakasvitswa panyama.
Iyo okisheni yakapera nekutengeswa kwegwaro rekutanga re chinyorwa chitsva che $ 343.000, anga ari 288869 euros. Iyi ingangoita kakapetwa ka12 kupfuura iyo dhijitari vhezheni yaive padhuze ne $ 28000, ingangoita 23581 euros.
Iyo gwaro Yakanyorwa muna 1973 uye yakasainwa neMabasa. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve gwaro. Mabasa akaipedzisa paangave angave makore gumi nemasere ekuberekwa uye achienda kuReed College kana kutora makirasi ekuongorora panzvimbo iyi. Ehezve, yakave yakasimbiswa nePSA uye Beckett. Kubhadhara kwakaitwa kuburikidza neiyo cryptocurrency Ethereum.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » A Steve Jobs chikumbiro chebasa chakashambadzirwa kweanoda kusvika mazana matatu ezviuru euros
165 mamirioni vanyoreri vane Spotify